Markab weyn oo Itoobiya Leedahay oo ku soo xidhay Dekedda Berbera
Home WARARKA Markab weyn oo Itoobiya Leedahay oo ku soo xidhay Dekedda Berbera
Berberanews-(Berberanews)-Markabkii uvu weynaa ee laga leeyahay dalka Itoobiya, ayaa ku soo xidhay Marsada Caalamiga ah ee Berbera.
Masuulliyiin ka socda Shirkadda Ethiopian Shiping Logistics Servive oo soo gaadhay Somaliland ayaa kulanno la yeeshay Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid, iyo Maareeyaha Guud ee Shirkadaha Laas Group Axmed Cisman Geelle.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid, ayaa ka hadlay kulanka dhexmaray weftiga ka socday dalka Itoobiya.
“Waxaa halkan inala jooga marti inooga timi Itoobiya oo uu ka mid yahay Guddoomiye Xigeenka Ethiopian Shipping Logistics Service, waxaanay halka nala joogeen maalmihii la soo dhaafay, waxaanay inoo faahfaahin doonaan waxyaabaha ay shirkadoodu ka shaqayso iyo sida ay inoola shaqaynayaan mustaqbalka dhow.” Sidaa waxa yidhi Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland.
Guddoomiye Xigeenka Ethiopian Shipping Logistics Service, Siraaj Cabdalla oo isna halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay shirkaddu qabato.
“Waxaa la aas aasay shirkaddan 1964kii, xilligaas oo waddamo badan oo Afrika ahi ka xoroobeen guumaystihii, waxaanay xiligaas wadamo badani bilaabeen inay kobciyaan dhaqaalahooda oo samaystaan shirkado maraakiibeed, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Ghana, Sudan, South Afrika iyo Masar, dhammaantood way iibiyeen shirkadahoodii, halka Itoobiya Shiping ay sii shaqaynaysay muddo laga joogo 54 sano. Waxaannu leenahay maraakiib shirkadda qaranku gaar u leedahay, qaar aan soo kiraysano iyo qaar aan heshiisyo kula jirno”.
Previous articleMaxkamadda Sare ee Somaliland oo laashay dacwado laga soo gudbiyay Doorashada
Next articleAxmed C. Geelle oo ka hadlay Kharashka shirkadaha Caymisku saareen Berbera